Nhare yeNFC Reader Munyori Vanopa uye Fekitori | China Mobile NFC Reader Munyori Vagadziri
AMR220-C1 Yakachengeteka Bluetooth nfc mPOS Reader
AMR220-C1 ACS Yakachengeteka Bluetooth® mPOS Reader inotsigira ISO 7816 Kirasi A, B, uye C makadhi akazara akazara (5 V, 3 V, uye 1.8 V), kusanganisira microprocessor makadhi ane T = 0 uye T = 1 protocol, ISO 14443 Type A uye B smart makadhi, MIFARE®, FeliCa, uye mazhinji maNFC tag uye zvishandiso zvinoenderana neiyo ISO 18092 standard. Iyo inonyanya kugadzirirwa kusangana nemabhadharo makuru uye zviyero zvekuchengetedza, senge Mastercard® Kutaurirana, Visa® Kutaurirana, EMV ™ Chikamu 1 & Chikamu 2. Iyo Apple Pay ® uye Android Pay ™-yatove.
ACR1255U-J1 ACS Yakachengeteka Bluetooth® NFC Reader yakagadzirirwa kuitisa pa-iyo-kuenda smart kadhi uye NFC kunyorera. Inobatanidza yazvino 13.56 MHz tekinoroji isingataure neBluetooth® yekubatanidza.
ACR1255U-J1 inotsigira ISO 14443 Type A uye B smart makadhi, MIFARE®, FeliCa®, uye mazhinji maNFC tag uye zvishandiso zvinoenderana neIro 18092 standard. Izvi zvinoita ACR1255U-J1 yakanakira yakafara nzira dzakasiyana dzekugadzirisa, senge maoko-emahara ongororo yeiyo yepanyama uye inonzwisisika yekuwana kudzora, uye kuverenga kweyekutevera. ACR1255U-J1 ine mapindiro maviri: Bluetooth (inozivikanwawo seBluetooth Low Energy kana BLE) yekubatanidza nemidziyo mbozha, uye USB Yakazara Speed ​​yePC-yakabatana mashandiro. Pamusoro pezvo, inogona kuverenga / kunyora nekumhanyisa inosvika mazana mana nemakumi mana emazana ematanhatu ekutaurisa smart kadhi uye NFC yekushandisa.
ACR35 NFC Mobile Mate Kadhi Kuverenga
ACR35 NFC MobileMate Card Reader ndicho chishandiso chakakwana chaungashandisa nefoni yako. Kubatanidza matekinoroji maviri emakadhi kuita rimwe, rinopa mushandisi wayo mukana wekushandisa magineti emutsetse makadhi uye smart makadhi pasina imwezve mutengo.